ALAHADY FAHA-EFATRA AMIN’NY KAREMY TAONA D - Fihirana Katolika Malagasy
Daty : 13/03/2010
Eo ampiomanana amin’ny Paka, mitozo amin’ny vavaka, ny famolahan-tena sy ny asa fitiava-namana, dia manasa antsika ny Fiangonana amin’ity Alahady ity mba hiravoravo, hienta-kafaliana sy ho dibo-kafaliana ao am-po (Tononkira fidirana Laetare). Eo am-pizorana mankamin’ny Paka manko isika , dia mankalaza ny Pakan’i Kristy. Ny fiombonantsika amin’i Kristy ihany manko no hahafahantsika miova fo sy miandrandra fahafahana marina tokoa.
Ambaran’i Md Paoly fa na iza na iza ao amin’i Kristy, dia zava-boaary vaovao izy (2Kor 5, 17-21) satria i Jesoa, ilay Fihavanantsika (Ef 2, 14) no nampiavanan’Andriamanitra antsika aminy. Tsy misy fampihavanana sy fibebahana marina araka izany raha tsy mandalo ao amin’i Kristy. Ambaran’i Paoly manko fa ny tena fibebahana marina dia Fihavanana amin’Andriamanitra. I Kristy no nanaiky ho Sorom-panonerana noho ny ota (Lev 5 – 6) ka nanaiky ho tonga nofo, hahatonga antsika ho fahamarinan’Andriamanitra ao aminy.
Ny Evanjely omaly (sabotsy 3 karemy) dia manampy antsika hahazo ny hasin’ny Soron’i Kristy. Ilay Farisiana sy Poblikàna tany an-tempony dia nampisehoan’i Jesoa ny toe-po amam-panahy hoentintsika manolotra ny vavaka amam-panatitra ho an’Andriamanitra mba hahazoana ny fahamarinana, mody any a n-trano (Lk 18, 9-14). Ilay farisiana dia nanolotra ny fananany sy ny ambim-bavany, hany ka nanadino ny tenany… ilay poblikana kosa, nanolotra ny tenany sy ny fahosany… izany no lazain’i Kristy hoe : tsy ekenao ny Sorona… koa ity aho tonga hanao ny sitra-ponao (Hb 10, 7 // Sal 40). Mazava loatra araka izany fa ny fanoloran-tenantsika amin’Andriamanitra no mampisy heviny ny Sorona Masina ankalazaintsika.
Miankina amin’ny fahazoantsika ny hevitry ny fahotana anefa izany. Tsy sanatria manko henatr’olona no mampalahelo antsika fa fanitsakitsaham-pitiavana, henatra ilay ray tia antsika, satria nanota tamin’ny lanitra, teo anatrehan’ny Fitiavan’ny Ray. Ny fahotana araka izany dia ny tsy fahalalana sitraka manoloana ny fitiavana, ka zary fahotana manohitra ny Lanitra. Ny fibebahana kosa, dia ilay fiverenana ao anaty, fiverenana amin’ny tena (mody ny saina, hoy ny evanjely) ka hahatsapana fa ny fitiavana ihany no hahavelona, ny fitiavana ihany no mahasambatra, fa tsy sanatria ny filibàna na ny mety ho hafhinaretana mandalo…
Ambaran’ity fanoharan’ny Evanjely ity ary fa tsy ny fananana no mahasambatra, fa ny maha-zanaka. Tsy ny fijanonana ao an-tranon-dray akory aza, tahaka ilay zoky nalahelo ny fiverean’ny zandriny, fa ny fahaizana mifaly amin’ny fifankatiavana sy ny fisiana. Tsy ny fananana ary no maha-sambatra fa ny maha-zanaka izay tsy hay atakalo vola aman-karena.
Tsy ho fivelomana amin’ny mana milatsaka avy any an-danitra anefa izany sanatria (Jos 5, 9-10-12) fa fiandrandrana ny vokatry ny tany, na dia mety ho hatsembohana sy harerahana aza no hahazoana izany. Ho anao izay afaka mamaky ity hafatra ity dia mazava loatra, voaantso ianao mba hanimpy, na dia ny am-bimbava ihany aza ho an’ireo tsy mahalala akory aza fa misy ny internet hahafahana mifandray sy mifanampy…
Ity ory velon’antso ka novalian’ny Tompo, hoy ny salamo setriny (Sal 33)… isika no tanana atsotran’Andriamanitra hamaly ny antson’ireo mitofezaky ny hanoanana, maniry ny hivoky ny hodim-bomanga omena ny kisoa, saingy indrisy… mandalo krisy avokoa, hatramin’ny fifampizarana ny mofo… mariky ny maha-kristianina.
 Amin’ity taona ity dia mbola hovakiantsika ny Evanjelin’ny zaza mpandany ny alahady 24 D, 12 septambra
< ALAHADY FAHA-5 MANDAVAN-TAONA TAONA D
Alahady voalohany amin’ny Karemy Taona D >